တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ခေတ်သစ် စစ်အေးတိုက်ပွဲကြီး ပိုပီပြင်လာပြီ (အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ ဖွဲ့တော့မည်) - Zet Star
တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ခေတ်သစ် စစ်အေးတိုက်ပွဲကြီး ပိုပီပြင်လာပြီ (အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ ဖွဲ့တော့မည်)
တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ခေတ်သစ် စစ်အေးတိုက်ပွဲကြီး ပိုပီပြင်လာပြီ (အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ ပစိဖိတ်မှာ ဖွဲ့တော့မည်)
တရုပ်ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့ နေတိုးအဖွဲ့လိုမျိုးအလားတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို အိန္ဒိယ သြစတေလျ ဂျပန်တို့နဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းဖို့ အမေရိကန်တို့ ရည်မှန်းလာကြပြီ အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာ နေတိုး အဖွဲ့လိုမျိုး တစ်ခုကို အိန္ဒိယ သြစတေလျ ဂျပန် တို့ပါဝင်စုစည်းပြီး တရုပ်ရဲ့ရန်ကိုကာကွယ်ကြဖို့ အမေရိကန်တို့က ရည်မှန်းချက်ထားလာကြပြီဆိုပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဒုဝန်ကြီး Stephen Biegun က တနင်္လာနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်
တရုပ်တို့ရဲ့ ရန်ရှာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသနဲ့ကမ္ဘာတဝှမ်းက နိုင်ငံတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုအပြုသဘော ဆန်ဆန်ပူးပေါင်းကာကွယ်နိုင်မယ့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ် အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ဟောင်း Richard Verma နဲ့ US-India Strategic Partnership Forum ခေါင်းစဥ်အပေါ် အွန်လိုင်းစကားပြောကြရာမှာ အခုလိုပြောလိုက်တာပါပဲ
အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသဟာ တကယ်တမ်းပြောရရင် စုစည်းအားကောင်းတဲ့ အားလုံးပါဝင်ကြတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပုံမျိုးမရှိဘူး သူတို့မှာ နေတိုးလို အီးယူတို့လို ခံနိုင်ရည်မျိုး ဘယ်နေရာမှာမှမရှိကြဘူး အင်နဲ့အားနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ အင်စတီကျူရှင်း မရှိဘူးဆိုတော့ ဖွဲ့စည်းဖို့လိုပါတယ် နေတိုးဖွဲ့စဥ်အခါတုန်းကလည်း ဒီလိုပါပဲ သိပ်ကြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့တာမရှိပါဘူး နေတိုးအဖွဲ့မှာ နောက်ပိုင်းမှပါဝင်လာကြပြီး စဖွဲ့စဥ်ကမပါခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတွေဟာဆိုရင် အရင်က ကြားနေကြမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုးနဲ့နိုင်ငံတွေပါ နေတိုးစဖွဲ့တုန်းက ဝင်ကြပါဟဲ့ဆိုတော့ ငါတို့က ကြားနေပဲ ဆိုပြီးပြောခဲ့ကြတယ်လေ
အမေရိကန်တို့အနေနဲ့ ပစိဖိတ်ကို အမြဲစောင့်ကြပ်ကြည့်နေလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိပါတယ် အခုလာမယ့် ဆောင်းဦးပေါက်လောက်မှာ လေးနိုင်ငံ အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ နယူးဒေလီမှာ ဆုံတွေ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတယ် လို့ဆိုပါတယ် အိန္ဒိယရဲ့ မာလာဘာရေတပ်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မယ့်အချိန်ကိုက်ပါပဲလို့ပြောတယ် အိန္ဒိယဟာ သူတို့ပြုလုပ်မယ့် မာလာဘာ ရေတပ်လေ့ကျင့်ခန်းမှာ သြစတေလျပါဝင်လာအောင် ဖိတ်ကြားမယ်လို့သိထားပါတယ် ဖိတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ အရေးကြီးတဲ့အဆင့်တဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်
အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသပင်လယ်ပြင်လုံခြုံရေးအတွက် သြစတေလျရဲ့ပါဝင်မှုဟာ အရေးကြီးပါတယ်လို့လည်း သူကပြောပါတယ် မာလာဘာရေတပ်လေ့ကျင့်ခန်းဟာ အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ ၁၉၉၂ခုနှစ်ကတည်းက ဘင်းဂလားပင်လယ်အော်မှာပြုလုပ်နေကျဖြစ်ပါတယ် ဂျပန်တို့ဟာ ၂၀၁၅မှာစပြီးပါဝင်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ် သြစတေလျဟာ မာလာဘာကို ၂၀၀၇ မှာ တစ်ကြိမ်ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ဒါပေမယ့် တရုပ်တို့က မကြိုက်တဲ့ဟန် စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံပြလို့ ပါချင်ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာမပါတော့ပါဘူး စင်္ကာပူကလည်း၂၀၀၇မှာတစ်ကြိမ်ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ်
တရုပ်နဲ့ နယ်စပ်ဒေသ ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယစစ်သား ၂၀ သေဆုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာ အိန္ဒိယဟာ သြစတေလျကို မာလာဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှာပါလာစေဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ဖိတ်နေခဲ့ပါတော့တယ် ဒီနှစ်မှာ ဂျပန်နဲ့ အမေရိကန်တို့ကိုဖိတ်ထားပြီးပါပြီ ကိုဗစ်ကြောင့်နောက်ကျနေရတဲ့အတွက် သြစတေလျဆီကို တရားဝင်ဖိတ်စာမပို့ရသေးဘူး လို့သိရပါတယ် အမေရိကန်ဟာ ဗီယက်နမ် တောင်ကိုရီးယား နဲ့ နယူးဇီလန်တို့ကိုလည်း အဖွဲ့ထဲပါစေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိပုံရပါတယ်
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးဟာ QUAD ရဲ့ Expanded Version ဆိုပြီးထုတ်ပြောလာလို့ပါပဲ QUAD ဆိုတာဟာ Quadruple လေးနိုင်ငံဆိုတဲ့အတိုကောက်ပါ အမေရိကန်အိန္ဒိယသြစတေလျဂျပန်တို့ပါတဲ့လေးနိုင်ငံ အဖွဲ့လို့ဆိုတာဖြစ်ပြီး expanded ဆိုတာက ထပ်တိုးချဲ့ထားတာလို့ဆိုတာပါပဲ ဒါ့ကြောင့် expanded version of the ‘Quad’ လို့သုံးနှုန်းလိုက်တာပါ စုစုပေါင်း၇နိုင်ငံပါ
နာမည်အသစ်နဲ့ စစ်စာချုပ်အဖွဲ့တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာတော့မယ်လို့မျှော်လင့်နေရပါပြီ တရုပ်ကြောင့်လို့ တရားခံရှာထားပါတယ် အမေရိကန်တို့ဟာ အိန္ဒိယကို ပရိုဆီ proxy လုပ်ထားရင်းနဲ့ အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသ ကင်းစောင့်တာဝန်လွှဲအပ်ဖို့များစီစဥ်နေတာလား စစ်ရေးစားရိတ်သက်သာအောင် ပေါင်းကြမှာလား ဆိုတာတော့ ထင်မြင်စရာရှိနေပါတယ် ဘက်မလိုက်ဘူး ကြားနေမယ် အနေတတ်ရင်ရတယ် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေဟာ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးတတ်တဲ့ အသင်းအပင်းခေတ်ကြီးမှာ ပြန်သုံးသပ်သင့်ပြီလို့ ထင်ကြပါသလား ?
← အမေရိကန်က စစ်ပွဲကို တကယ်မတိုက်ရဲတာလား? မတိုက်ချင်တာလား? (သာကော တယောက်ချောင်ထဲမှာ ကျိတ်ငိုရမယ့်အချိန်)
တရုတ် (သို့မဟုတ်) အိမ်သာထဲက လိမ္မော်သီး (ပေါက်ဖော်ကို အလွန်အားကိုးချင်သူများ ဖတ်ဖို့) →